आफ्नै तर अरूको :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
लाग्छ यो जिन्दगी पुरानियो। कुर्सीमा बसि यहि सोँचे। हुइय लामो सास फेरेँ।म आँफूलाई गरीब सोँचे। परदेशको ठॉउमा दिनका दिन दुख गरेर धनि बन्न नसकेको एक दरिद्र मानव म। मेरो बुबा,आमा,भाई,बहिनी सबका सब गरीब छन्, म जस्तै।
म भुक्का भएर ,भको सबै तलब घर पठाएर के खान यो सि.यू (कोरीयन बजार) मा आएँ।
म ऑफूलाई दुखी सोँचे फेरी।आजसम्म कमाएर न मलाई पुग्यो न यसबाट केहि खुशी मिल्यो। मिल्यो त झन् उहि दुखको सगरमाथा जत्रो भारी, अनि खुशी ?खुशी त झन् सोँच्नै छोड्दे (मनले दिक्क मान्दै मनसँग भन्यो ) र सोँच्नै छोडेँ पनि।म ऑफूलाई र आफ्नै पुरानिएको जिन्दगी हेरेर तरस खान्छु।बॉचुञ्जेलको न जिन्दगी हो। तर म भोगे जति यस्तै भोगेँ ।गरेजति यस्तै गरेँ ,माने जति यस्तै मानेँ। जिन्दगी जति नयॉ नयॉ भनेर बिताएँ त्यति पुरानिएछ आफ्नै शरीर आफ्नै हात आफ्नै मुटू, उहि प्रेमिका जस्तै जुन छोडेर गएकै थुप्रै समय भएछ।
खान मन भरपूर छ बजारमा । चुस्कि मार्न मन छ 'कास बियर' ।एक्लै झुम्नुको मजा पनि त बेग्लै छ। भाबुक हुन मन लाग्छ छरपस्ट भाबनाहरू देखेर। म जस्को खुशीको लागी दिनहुँ मेसिनसँग लडिरहेको छु ति सबै मेरै खातिर दुखी बनेर लडिरहेछन्। मेरो प्रेमिका उ त झन कहॉबाट खुशी हुनु? उस्लाई त आफ्नै नयॉ नयॉ फर्माइस चाहिन्छ। उस्लाई मेरो चिन्ता छ दिनहुँ घण्टौं गाली गर्छी । करॉउछी, रुन्छी भनेको हुनैपर्छ ।बच्चा जस्तै हो उ त खुशी हुने नाम लिन्ने बरू बच्चा चकलेटमै खुशी होला।अनि मेरो जिन्दगी अहँ त्यो त अघि नै सोँचिसकेँ छैन त।
आफन्तिहरू त सित्तैमा गाली बाहेक केहि दिँदैनन् तर महड़्गो गिफ्टको उपहार म लगिदिनुपर्छ खुशी बनाउँन।जस-जस्लाई खुशी बनाउन चाहान्छु ति सबै अहिलेसम्म, चन्द्रमामा लागेको दाग जस्तै कालो अनुहार बनाएर गम्किरहेका छन्।खाने मुडले पर्स खोल्न लगायो आफ्नो दुइचार बैड़्कका कार्डहरू छरपस्ट छन् पर्समा।न पैसा छ न बैड़्क कार्डमा पैसा छ। यि सबैले परिवारले जस्तै , मैले जस्तै तलब बुझ्नेदिन पर्खिरहेका छन्। तिनीहरू सबै गरीब छन् र त म गरीब छु। पर्समा राखेका बुबाआमाको तस्बीरले मलाई हेरिरहेका छन्। सायद बाबाको हँसिलो फोटो निन्याउरो भएको छ छोराको अनुहार देखेर।सायद सँधै खुशी सुखी हुनु भनेकी मेरी आमाको भाबुक फोटोले मलाई झन दुखी बनाएको छ । ऑसु परेला नाघेर बाहिरीयो।
बरू ऑशु त ऑखा दुखेको नाटक गरेर लुकाउन सक्छन् मान्छेहरू तर मन ।मन त दुखेको दुखेई हुन्छ र जिन्दगीको दुखै लुकाइदिन के बेर मान्छेहरू?
पर्स हातमै छ पुरानी प्रेमिकाको पुरानो अक्षर भएको पुरानो प्रेम पत्र पनि त्यँहा सुरक्षित छ। म उस्लाई सम्झेँ एकाएक। "उ कत्ति राम्री?" यहि सवाल छ मनमा तर उत्तर ?उत्तर त बयानमा ऑउदैन मनबाट।उस्को झोलाबाट उस्को कक्षामा गएर उस्कै डायरी चोरेको याद नआएर कहॉ जान्थ्यो?
आइहाल्यो। उस्ले डायरीमा सजॉउथि अक्षरहरू। ति प्रत्येक अक्षरहरूमा म पाउँथे मैले महसुस गरेर पो हो कि? उस्ले गत सालको टुरको फोटाहरू मध्ये उ र म भएको ग्रुपको फोटो टॉसेकि थिइ अ..गाडी ।मैले सोँच्थेँ त्यो ग्रुप मध्य मलाई मात्रै हेर्दि हो।मैले एक्लै याद गरेजस्तै। मैले सरले याद गर्न दिएको होमवर्कमा उस्लाई बाहेक कहिले याद गर्थिन। सर सँधै कुट्थे याद गर्न नसकेकोमा।म यादमै डुबेर याद गरेको सरले कहॉबाट जान्नु।उनको डायरीमा मैले कार्यक्रममा सुनाएको गजल भेटॉए जुन म ऑफैसँग सुरक्षित थिएन्। खुशीमा त्यति खेर त्यही अबधिमा धनि भएको थिएँ। त्यहा धेरै शब्दहरू मेरो लागी राखिएको थियो।या भनौँ रचिएको थियो। उनि एकान्तमा बसेर मलाई सम्झिन्थिन भन्ने कुराले म बसिरहेको यो ठॉउसम्म भाबुकता र ऑसुले लोला हान्यो।
बिचरो म ,मैले मेरो अनुहारको कहिल्यै माया गरिन तर उनले मेरै नामको डायरी लेखिन्। उनले कहिल्यै डायरीमा लेखेको भावना म कहॉ पठाइनन्।उनले कहिल्यै देखाइनन् प्यारका इजारहरू मेरो अघि।प्यारले भरिएको उनको ऑखा कहिल्यै बुझिन जति बुझेँ त्यही डायरीमा भएका मेरो बुझ्ने भाषा बुझेँ। म दिनहुँ पढेँ उनले लेखेका ति अक्षरहरू।
म कुन प्रसड़्गबाट कहॉसम्म सोँचेर ऑखामा उस्का साथिहरू (ऑशुहरू )बोलाएँ। उनको डायरी भरी म थिएँ जुन डायरी मेरो थिएन। आफन्तहरूको मन भरी बसेँ ।आमाको मन भरी बसेको छु तर त्यो मन आमाको हो मेरो होइन्। बुबाको सबै आसमा म छु ।जस्को मनमा छु त्यो मेरो होइन। आफ्नो हो तर अरूको हो। म मेरो हो तर अरूको ।मैले कमाएको पैसा मेरो हो तर अरूको हो ।सबै मेरो हो त्यो अरूको हो । म हरेक कुरामा मलाई पॉए तर ति सबै मेरो थिएनन्।
प्रेमिकाले आफ्नो डायरीमा भएको 'म'हराएको खबर कसैलाई गरिनछन्। एक दिन मेरो झोलाबाट पून: हरायो। त्यहॉ 'उनि'राखेको मेरो डायरी पनि थिएन्।म खोज्न गइन र कसैलाई पनि भनिनँ ।कुनै दिनपछी त्यो डायरी पून: झोलामै आयो। उनि र म बिच जति डायरी बोल्यो त्यति हामी बोल्न असमर्थ भयौँ।अरू भित्र ऑफू भएको थाहा नहुँदा ।ऑफू भित्र अरू भएको आश्वासन दिलाउन नसक्दा म एक्लो भएको भान गर्छु। यहि कुराले हजारौँ मान्छे प्राण त्याग्छन् यहि डरले आफ्नै तर अरूको पनि आफ्नै हो म भन्ने सम्झेर नयॉ जिन्दगी जिउने मन हुन्छ।
हाल द कोरीया (जेजु )
प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक ०२ (October 19, 2017)